Maxaa ka soo baxay kulamadii nabadeynta colaada magaalada Gaalkacyo ? – SBC
Maxaa ka soo baxay kulamadii nabadeynta colaada magaalada Gaalkacyo ?
Kulamo xiriir ah oo ujeedadu aheyd in xal waara laga gaaro colaada & dhiiga ku qubtay magaalada Gaalkacyo ee xarunta Gobolka Mudug oo ay lahaayeen waxgaradka, cuqaaasha & culima’udiin u istaagey daminta xiisadahaasi ayaa waxaa ka soo baxay rajo wanaagsan & yadadiilo dhanka nabada ah ka dib markii qodobo muhiim ah ka soo baxeen kulamadaasi.
Kulankaasi kii ugu dambeeyey oo maanta ka dhacdey Hotel-ka City Canter ee ku yaal xaafada Garsoor oo ay colaadu ka aloosneyd ayaa waxaa ka soo baxay qodobo xabada lagu joojinayo isla markaana lagu soo afjaro gacan ka hadalka dhimashada & khasaaraha kale dhaliyey laguna badalo jawi nabadeed oo la isa soo horfariisto.
Kulamadan ayaa waxaa ka qayb galey waxgarad & culima’udiin ka yimid gobolada kale ee deegaanada Puntland waxaana dadkii ka qayb galey ee dhexda marada u xirtey joojinta colaadan ka mid ahaa Sheekh C/qaadir Nuur Faarax (Gacamey) oo ka mid yimid magaalada Garoowe, Sheekh Sayid Cali Xaaji Xirsi oo ka mid ah culuma’udiinka Ahlu Sunna, Garaad Maxamed Cilmi Shirwac, Suldaan C/qaadir Jaamac, Eng, Cumar Maxamed C/lle (Eng, Cumar dheere), Suldaan C/qaadir Jaamac, Caaqil C/wahaab Maxamed Gurey, & waxgarad kale.
Kulankan ayaa waxaa laga soo saarey afar qodob oo saldhig looga dhigay joojinta colaada Gaalkacyo isla markaana dagaal dambe looga waantoobo waxaana qodobadaasi ay kala yihiin.
1:In la sameeyo xabadjoojin lagana shaqeeyo in dagaal dambe uunu dhicin.
2:In la kala qaado wixii ciidan ah ee isku hor fadhiya goobihii lagu dagaalamay.
3:In dib loo furo ganacsiga.
4:In dadkii ka barakacay Gaalkacyo dib loogu soo celiyo magaalada loona sheego in colaadii dhamaatay.
Garaad Maxamed Cilmi Shirwac oo markii qodobadaasi la isku raacay shirka ka hadley ayaa sheegay in ay ka codsanayaan dadka gobolka gaar ahaan magaalada inay dhaqan galiyaan qodobada gaar ahaan qodobka xabad joojinta, waxaana uu amaan u soo jeediyey waxgaradkii beelaha Majeerteen & Leelkase ee kulankaasi soo qaban qaabiyey.
Issimada & waxgaradkii kulankaasi ka qayb galey ayaa sheegay in loo baahan yahay in nabadda la qaato oo nabadda laga shaqeeyo, waxaana ay ka codsadeen dadweynaha inay u sabraan nabada lagana hortago wax kasta oo colaada dib u soo celin kara.
Dadweynaha magaalada Gaalkacyo ayaa soo dhaweeyey dadaalka culuma’udiinka & waxgaradka ee ku jihaysan daminta colaada & shidada iyagoo ugu baaqay in la fuliyo dhamaan qodobada heshiiska.